हिमानीले दिइन् पारसलाई माफी! पारससंगको तस्बिर राख्दै लेखिन् यस्तो भावुक स्टाटस – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाज/हिमानीले दिइन् पारसलाई माफी! पारससंगको तस्बिर राख्दै लेखिन् यस्तो भावुक स्टाटस
काठमाडौ । पूर्व रानी कोमल शाहको जन्मदिनमा पूर्वयुवराज पारस शाह पनि सहभागी भएको विषयले अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । नेपालमै भएपनि पूर्वयुवराज पारस परिवारका साथमा छैनन् । उनी एक्लै वस्दै आएका छन् ।